Manje uvuse Holm Imvelo! | Holmbygden.se
Posted on 6 May, 2017 ngu Holmbygden.se
Manje, izinyoni ezithuthayo zibuyela, zingabantu 10 izikhathi ngaphezu kwalokho esasinakho ebusika ezweni lakithi. Okokuqala kuyinto inyoni emnyama yaseNgilandi manje. Kwaba Titti futhi Jörgen Olsson, Östbyn, libike ukuthi owokuqala; 12/3. Ngasekupheleni kwalelo sonto, futhi chaffinch wazibonakalisa kubo. Kukhona inyoni ukudla ukuxhumana endaweni ukuthi uthola vårbesöken lokuqala. Lapha e-Navarn (300 MOEH) kwaze kwaba 19/3 phambi inyoni emnyama yaseNgilandi abokuqala.
Iminyaka eyodwa nengxenye edlule ngenza isikhalazo ukuze Izinyoni nezinye izilwane ngesikhathi Holm Bygdens eliyisiqalo (Futhi kule magazini slide). Titti Olsson, Östbyn, no-Arnold Johansson, Långliden, Zazingobani lezo owayebonise isithakazelo.
Arnold (82) Lo magazini uye waba wehlathi futhi isazi sezinto eziphilayo wokuzilibazisa, yokuhlala endaweni efanayo, kusukela ebuntwaneni. Ngangimhambela ngo-Ephreli 2016 futhi lent nemvelo yakhe yezenzakalo zosuku. Uye waphawula 20 vårfåglars wokuqala ukufika usuku Långliden phakathi 1951-2011. 60 ngonyaka amanothi kuyoba isayensi Mellannorrland naseSweden. Lapha siyabona ukuthi Lark ukucula, Lapwings babe lingandile / kamuva nokuthi, esikhundleni salokho, kukhona inyoni emnyama yaseNgilandi futhi chaffinch kuqala Liden ngesikhathi entwasahlobo manje. idayari Arnold usuthunyelwe iBhodi Administrative futhi IsiSwidi Lesitshalo Information Centre (SLU Uppsala). Swedish Agricultural University (SLU) usuqalile fenologiprojekt yethu ("Ukufika kwentwasahlobo" ezingxenyeni ezihlukahlukene zezwe) ngokuya yezimila nezilwane ezihlukahlukene. Luhilela butterfly lokuqala, bumblebee, nge, izimbali, inyoni ukufika, mm ncibilika endaweni (ngesakhiwo) uhlala. Lena yingxenye izinguquko ezilandelayo sezulu eSweden / Umhlaba.
Titti futhi Jörgen has futhi izikhathi eziningana waphawula uphondo izikhova nomhlaba izikhova lapho kuhlwa ku infields ohlangothini enyakatho Holmsjön kusukela maphakathi no-Ephreli! Christin "Titti" Olsson, Östbyn, Ubaba wasebenza Sundsvall F.D.. "Bird legend" e 80- futhi 90 talet.Nils Lundmark, esengene zisuka futhi wafuna ivuselele inyoni yabo isithakazelo. Nisse, owafa 2006, wachitha isikhathi esiningi phezulu Holm- futhi endaweni Liden yokusungula futhi ukukhala amalulwane, wamisa esebenza ngogesi ezingamakhulu amabili endaweni yethu phakathi 80-90 ekhulwini (izikhova futhi dippers). ngaphansi Sina 60 minyaka njengethuba ornithologist ukubeka Nisse phezulu phezu 1600 esebenza ngogesi inyoni encane futhi mayelana 400 izikhova. Yena ringed phezu 12.000 izinyoni.
Årsvädret e Holm kwakuyinkathi evumela nezilwane (Futhi Flora). Agasti no Septhemba kwaba ukufudumala kunokuvamile futhi nomthelela ekusindeni amagquma babe ephakeme kunaleyo ngesikhathi ehlobo evamile. ngokuvamile uyasinda e Chick kusuka udoti onyakeni wokuqala. Manje, ngasinda sizwele phambi hambisa yathatha izintambo ngo ekwindla.
Osayindiwe has iqoqo zizalela izinyoni kule ndawo kusukela 2000 (ngesikhathi Storsten Intuthwane isipele Storflon, enyakatho Vike) futhi Lokåsen e Nordanede (eningizimu Holm).
Leaderboard ku ezikhona kule minyaka 4 iminyaka ibukeke ebhokisini eliseceleni. Ziyakwazi ehlathini ezindaweni zethu, futhi lezi 16 izinyoni kuhlanganisa mayelana 80 % walabo ezitholakala emahlathini Holm sika.
I isijobelelo ngezansi 13 abantu ababika abakutholile e Holm phakathi nonyaka (7 yokuhlala Sundsvall!!?). Lapha ungabona ngokuningiliziwe lokho Kubikwa Holm.
Kodwa silindele ozibone yakho ngesikhathi 2017. Sicela uxhumane Titti futhi ukuthi ngenzeni ukuba abe intatheli yalokho okwenzekayo nemvelo Holm. Thina sikusize okwengeziwe.
izinyoni Kubikwe e Holm 2016
Ebusika, le "ukushoda izinyoni", nje 10 % kuqhathaniswa ehlobo. Bheka ibhokisi elithi eceleni.
Ezinye kokuma ekhethekile ngesikhathi 2016 kuyinto Golden Eagle inkathi lokushutheka ehlathini enyakatho Holmsjön. Titti futhi Jörgen i Östbyn babe kestrels isidleke isidleke inyoni phezu kwezwe iminyaka eminingi. Ngaphezu kwalokho, manje entwasahlobo 2017 bobabili inhlabathi isikhova futhi hornuggla ezimfundeni at Holmsjön eziseduze kwemizi yabo.
Abasebucayini / izinyoni ezisengcupheni, ezivamile Holm
Miljödepardementet babe, nge-EU, zu S. K. I-Red List osebenza kubo bonke izilwane- futhi växtarterter uhlu European zezinto eziphilayo ezisengozini.
eduze ezisengozini (NT kule Annex)
sengozini (VU kule Annex)
Eziningana eduze ezisengozini futhi sengozini izinyoni abe endaweni kahle ukusinda endaweni Holm.
Ukuchofoza ukuze sandise noma ukubona okunamathiselwe for PDF: lwezilwane ezisengozini futhi eduze esisongelwe Holm
"Okudala at Navarn"
Bika yezinyoni kithi:
Umgomo ukwakha inethiwekhi emikhulu esakheka isithombe kwezinhlobo ezitholakala endaweni. Ngu isandiso, inethiwekhi uzobe enwetshiwe ezincelisayo, izinambuzane kanye nezitshalo uthole isithombe esibanzi isimo kule esenyakatho olwenzeka endaweni ehlathini. Kodwa-ke imayelana ukukunika ukwazi ukuze sikwazi ukudlulisa imvelo Guard.